Aogositra 18, 1997
Ny rafitra toeran'ny GPS miorina amin'ny vidim-bidy vidy dia misy ankehitriny ho an'ny tetikasa fanodinana kely. Ny rafitra mahazatra dia misy solosaina mifanentana amin'ny PC mifanaraka amin'ny rindrambaiko, miaraka amin'ny rindrambaiko Trimble 4000 andiany GPS ary rindrambaiko entin'ny Windows toa ny HYPACK.
Ny teknisianina mahay dia mahay mametraka rafitra fototra amin'ny dredge kely sy antonony kely ao anatin'ny iray na roa andro. Vantany vao tafapetraka ny rafitra dia ny olona iray manana fahalalana mahazatra momba ny fitaovana fanaraha-maso elektronika (toa an'i Loran) dia afaka voaofana hampiasa ilay rafitra ao anatin'ny roa andro.
Tahaka ny fitaovana elektronika rehetra, ny rafitra GPS dia tsy misy olana vitsivitsy, fa ny rafitra napetraka tsara dia tokony ho 90 ho 95 isan-jato eo ho eo, ary ity salan'isa ity dia mihatsara hatrany. Misy hery sy fahalemena, ary ny fampiharana amin'ny tetikasa sasany dia tsara kokoa noho ny hafa.
Napetraka sy napetraka amin'ny fomba tsara, any amin'ny ankamaroan'ny tontolo iainana ny rafitra GPS no hitatitra ny toerana misy ao anatin'ny fotoana iray miaraka amin'ny fanavaozana iray segondra ao anatin'ny iray metatra na mihoatra ny toerana marina. Azo itokisana bebe kokoa noho ny mikraoba na ireo antonony.
Ny toeran'ny dredge na cutterhead dia aseho amin'ny fotoana tena izy amin'ireo mpanara-maso izay azo apetraka amin'ny toerana rehetra tsy azo tanterahina amin'ny dredge. Ireo toerana dia azo alefa misoratra anarana amin'ny solosaina ary averina ao aoriana kely hamerenany ny fivoaran'ny asa. Ity toetoetra tokana ity dia voaporofo fa tena sarobidy amin'ny fitandremana ny hetsika dredge. Tena mora ny mamolavola faritra maina, mamerina ny sakamalaho sy ny sakana. Ankoatra ny toeran'ny dredge dia afaka aseho an-tsary amin'ny alàlan'ny faritra misy ny fantsom-pifamoivoizana, fetran'ny fantsona, fiantsonana, angady ary sakana.
GPS dia rafitra toetrandro rehetra. Na dia mety mihena aza ny fahamarinan'ny rahona matevina na ny oram-panala na ny zavona, dia natao hampihodinana miaraka amin'ny maha-marina azy ao anatin'ny ankamaroan'ny fepetra.
Tsy misy marika ara-batana, antonony na seranam-piaramanidina tokony ho notazonina, nohavaozina na hotompoina (raha misy fanitsiana fanavahana ao amin'ireo làlan-java-misy). Ny fikojakojana ny rafitra dia kely indrindra. Rehefa vita ny fanombohana sy ny fiofanana voalohany, ny tetikasa mahazatra dia azo tanterahina amin'ny antso an-tsitrapo latsaky ny iray isam-bolana ary antso an-tserasera indraindray.
Very ny fahamendrehan'ny GPS na afaka miasa tsy mandeha amin'ny laoniny rehefa misy ny fepetra "multipath". (Multipath no nahatonga rehefa zanabolana famantarana lehibe hita taratra eny vy faritra.) Loharanom-baovao ny multipath ao amin'ny tontolo an-dranomasina ahitana fitoeran-javatra lehibe fanentanana an-tsary, sambo fiara mifono vy sy ny solika. Amin'ny toe-javatra izany, dia tokony hitsahatra ny mpandraharaha hetsika mandra-multipath loharanom-baovao dia esorina avy amin'ny faritra, na mampiasa voafetra ny fampiasana ara-batana tandavan.
Ny dredge dia tsy maintsy manana faritra marim-pototra sy maina azo antoka hametrahana ny solosaina sy ny fitaovana. Ny solosaina mahazatra dia tsy mandeha tsara amin'ny hafanana na hatsiaka be, manodidina ny fihozongozona be loatra na rehefa lena. Mifanohitra amin'izany, misy solosaina misy masontsivana sy azo antoka kokoa azo alaina; mihena fotsiny ny vidiny. (Ny rafitra fenitra dia napetraka ary miasa tsara ao anatin'ny takelon'ny Ellicott® Brand Series 370 10 "dredge.)
Dredge mpandraharaha tokony nampianarina ny fampiasana ny solosaina sy ny rindrambaiko. Raha ny fandaharana vaovao dia "mpampiasa-namana," ny fotoana fampiofanana dia afaka miovaova be, arakaraka ny aptitude ny olona. Amin'ny ankapobeny, dia tokony ho iray ihany ny olona manontolo andro eo amin'ny tetikasa miaraka amin'ny solosaina tsara ara-drariny ny fahaiza-manao.
Na dia nohamoraina tamin'ny fitaovana taloha aza dia tsara kokoa raha apetraka ireto rafitra ireto, napetraka ary karakarain'ny matihanina. Ny orinasa manofa rafitra dia tokony hanome an'io serivisy io amin'ny vidiny mirary.
Na dia azo itokisana ny fitaovana dia mety hitranga ny tsy fahombiazana. Aza adino ny mahafantatra hoe aiza no hahazoana rafitra backup (matetika avy amin'ny orinasa lease).
Tao anatin'ny dimy taona lasa, nametraka rafitra elektronika maro tamin'ny Cedges sy sambo sambo ny CLE. Namadika ny antontan-tariby fisianay dikan-tany ho an'ny rafitra Trimble GPS, ary ny rindrambaiko Coastal Oceanographics HYPACK.
Ny fametrahana iray vao haingana dia natao ho an'ny AGM Marine ho an'ny tetikasa fanariana rano ao Provincetown, Massachusetts. Nampiasa Ellicott ny AGM® Brand Series 370 dredge, izay voafetra fa ampy efitra toerana. Ny solosaina dia napetraka eo ambony talantalana nihantona teo amin'ny valin-drihana efitra, miaraka amin'ny efijery naato mivantana ambany izany. Ny GPS sy ny herinaratra dia napetraka tao anaty boaty tsy misy rano ao ambadiky ny fipetrahan'ny mpandraharaha. Nisy mpamokatra kely nampiasaina mba manome hery.
Ny fifanekena ho an'ny fanatsarana ny asa fanadiovana y-tongotra 250 manerana fidirana fantsona ho Provincetown Harbor. Ny faritra tokony dredged dia tsy ara-dalàna miendrika. Clé namorona ny sary eo amin'ny solosaina Monitor izay nampiseho ny fantsona fetra, 50-tongotra maivana, 50-tongotra toby sy drafitra ny tena asa fanadiovana y sy ny halaliny faritra. Ity fampisehoana ity dia nanamora ny fahitan'ny mpitantana ny dredge sary an-tsaina ny toerana misy ilay dredge mifandraika amin'ireo drafitra ary hihoarana ireo faritra "tsy mihady". Raha vao ny dredge teny an-dalana, ara-dalàna fiasan'ny ny solosaina dia afa-miala valo fanalahidy: <+> sy <-> hanao zoom sy nivoaka, efatra zana-tsipìka fanalahidy mba hamindra ny efijery sary ho toy ny dredge nifindra, ary rehefa miditra ny hamafa ny ny cutter, ny "s" ary ny "e" fanalahidy ho an'ny fanombohana sy faran'ny fanasana.
Ankoatra ny tombony azo tsapain-tanana, dia afaka nahazo tombony fanampiny izay tsy ampoiziny ny mpifaninana. Noho ny firongatra be, ny fifamoivoizana ny sambo ary ny andro ratsy, dia voatery nifindra tsy tapaka teo amin'ny toby ny sidina. Amin'ny toe-javatra tsirairay, ny tompon'andraikitra amin'ny dredge dia afaka nanolotra ny toerana marina misy ny dredge alohan'ny hamindrana azy ary hitondra azy hiverina any amin'ny toerana tena izy rehefa naverina ny asa. Nandritra ny tetik'asa, nifanena tamin'ny sakana maro ny volon-koditra vokatry ny fihodinam-bolana sy ny taimbanina. Ary ny mpitantana dia afaka nitatitra mazava ny toerana nanaovana ny sakana tamin'ny injeniera monina ao Corps tamin'ny famakiana mivantana ny kôpitaly teo amin'ny fanaraha-maso. Rehefa vita ny fanadihadiana natao tamin'ny posted dredge dia afaka nanolotra fampisehoana vaovao ho an'ny mpanara-maso ny CLE izay mamaritra ny faritra tsirairay izay mitaky fanodinana indray. Io dia nahafahan'ny mpitantana haingana nifindra haingana sy nivezivezy haingana tany amin'ny toerana tsirairay ka tsy nisy dikany akory.
Ny AGM dia nampiasa rafitra fametrahana microwave taloha ary nahita fa ny fonosana GPS dia somary lafo vidy kokoa ary azo itokisana ary mety homena mpampiasa. Ny vidin'ny fametrahana, ny fananganana, ny fampiofanana ary ny fitaovana dia lafo kely kokoa noho ny vidin'ny mpanara-maso toerana amin'ny fametrahana antonony.
Tsy misy isalasalana fa ny fivoaran'ny GPS miakatra amin'ny fandotsa-bato dia manomboka mipoitra fotsiny. Raha mbola mihatsara ny fitaovana sy ny logiciel dia hahazo tombony vaovao avy amin'ireo izay mampiasa azy io hitarika azy io. Ny zava-misy dia raha mitohy ny fanakorontanana ny tontolo iainana, tsy mitsaha-mitombo ny vidin'ny fandatsahan-drindrina isaky ny cubic yard. Ny fahaizan'ny zavamaniry dredge mifehy ny haben'ny fandotoana tafahoatra ary mampihena ny fotoana lanin'ny fanodinana indray dia lasa fanapaha-kevitra momba izay mandresy na very tetikasa. Ny toeran'ny toerana misy ny vanim-potoana azo antoka dia zava-dehibe amin'ny fifehezana ireo zavatra roa ireo.
Excerpted avy amin'ny International asa fanadiovana y Review
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetik'asa fanondrahana kely kely